musha / Platforms / piritsi / MT4 ye Android
Mutengo weMT4 Mobile yechipatara ndiyo nzira yako yemisika yemari, kunyange paunenge uchienda, achikupa mufananidzo wezvinhu zvose zvekutengesa zvaunonakidzwa kushandisa paMetaTrader 4 desktop platform.
Mhando dzakawanda dzezvikwata zvekutsvaga zvino yava kuswedera kutsigira basa rako rekutengesa - 30 yezvidimbu zveunyanzvi zvekugadzira, zvikamu zvakasiyana-siyana zvemazuva uye zvenguva chaiyo yepamusi yemari yemusika. Iye zvino zviri nyore kuti simba paurongwa hwako hwekutengesa kuburikidza ne iPhone yako / iPad / iPod Touch kana Android.
Kuwanika kwekero yako yekutengeserana yeFXCC mumatanho matsva e3 - download, kuisa uye kupinda kune mobile mobile trading platform uchishandisa zviyeuchidzo zvekambani yako yeFXCC.
Pamusoro peMT4 mobile unogona:
Connect to your account account from anywhere;
Shandisa mutengo wako wemusika uye udzoke nheyo nekuisa, kuchinja kana kuvhara mhizha;
Shandisa 30 technical indicators;
Shandisa uchishandisa nzvimbo-ye-inyanzvi.
Available pamusoroApp Store